dimanche, 15 novembre 2020 18:06
Andapa : Kamiao hitaomana fako sa hitadiavam-bola amin’ny fasika ?
Niteraka resabe sy fanehoan-kevitra samihafa tamin’ny facebook ny fahitana kamiao volomboasary iray fitaomana fako hitan’ny olona any ampakana fasika, nefa ny fako eny amin’ny dabam-pako ao Andapa miandrona.
Niely tamin’ny tambazotra sosialy ny sary, narahin’ny fanontaniana hoe "fa kamiao natao hitaomana fako izy ity sa lasa itadiavam-bola amin’ny fasika" ?
dimanche, 15 novembre 2020 18:00
Kitra - Barea : Ho anisan'ireo mpilalao hiatrika amin'ny Côte d'Ivoire i Zotsara
Nodisoin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra, ny resaka niely tamin’ny facebook fa voan’ny tsimokaretina Covid-19 i Zotsara, iray amin’ireo mpilalao 23 mandrafitra ny delegasiona malagasy miatrika ny lalao mandroso sy miverina amin’i Côte d’Ivoire.
« Tsy araka ny feo mihely mahakasika an'i Zotsara, izay ao anatin'ny delegasiona tonga eto Toamasina, izay nolazaina fa hoe : « positif » dia voamarina tamin'ny fitiliana natao izao maraina izao fa « négatif » izy, ary ho anisan'ireo mpilalao hiatrika ny Côte d'Ivoire amin'ny talata izao. Ny staff rehetra koa dia tsy misy mitondra ny otrikaretina Covid-19 », hoy i Nicolas Dupuis.
Sabotsy Namehana sy ny manodidina : Ravan’ny Polisy ireo andian-jiolahy mpangalatra scooter
Valo lahy no voasambotra, moto scooter telo no tratra. Vokatra azon’ny Polisy avy ao amin’ny Commissariat Central Avaradrano ireo, nandritra ny hetsika ady amin’ny halatra moto nataon’izy ireo omaly sy androany marainan’ity alahady 15 novambra ity.
dimanche, 15 novembre 2020 17:45
Didier Ratsiraka : Manao antso avo ho fanairana ny isam-batan'olona sy ny Malagasy
Nanao fanambarana miendrika antso avo tao amin’ny pejy facebook ny filoham-pirenenan'i Madagasikara teo aloha Didier Ratsiraka, manoloana ny trangan-javatra miseho manodidina ny baolina kitra sy ny fahasalamam-bahoaka.
Indro averina eto manontolo izany :
« Amin’ny maha zoky ray amandreny ny tenanay, amin’ny maha mpilalao iraisam-pirenena tao amin’ny Ekipa malagasy teo amin'ny sehatry ny baolina kitra ny tena, ary amin’ny maha filoham-pirenenan'i Madagasikara teo aloha anay, dia toa mahatsiaro tena manana andraikitra sy adidy ihany noho ny trangan-javatra misy.
Koa, manao izao antso avo izao ho fanairana ny isam-batan'olona sy isika Malagasy rehetra tsy vaky volo ny tenako, satria mbola mitoetra eto amintsika mandrak'androany ny valan'aretina corona virus.
dimanche, 15 novembre 2020 17:43
dimanche, 15 novembre 2020 17:41
15 novembre : Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route
15 novembre : Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route.